Wasiirkii hore ee war-faafinta maamulka Somaliland oo Carabta kutilmamay “Cadawga Somaliland”. |
Wasiirkii hore ee war-faafinta maamulka Somaliland oo Carabta kutilmamay “Cadawga Somaliland”.
Cabdiraxman Yuusuf Ducaale (Boobe), Wasiirkii hore ee Wasarada Warfaafinta iyo Wacyigalinta maamulka Somaliland ayaa aad uga xumaaday Safarka Madaxweynaha maamulka Hargeysa uu ku tegay Imaaradka Carabta.
Cabdiraxman Yuusuf Wax uu sheegay in Wadamada Carabtu ay waligood ku fiirsan jireen Somaliland marka ay dhibaatadu heysato isaga oo tusaale u soo qaatay weerarkii Dawlada Siyaad Barre oo uu sheegay xitaa in carabtu aysan ka damqan iskadaa gurmade.
“Mudadii Dheereed ee aynu dagaalka kula jiray Siyaad Barre ee Dadkeenu Darxumada iyo Gaajadu haysay ,Nimanka Carbeed inooma soo gurman, marka ma Muuqato wax faa’iido ah oo ay noo soo wadan. nimanka Carbeed ee khamiisyada iyo Diracyadaxiran”. Wasiirkii hore ee war-faafinta Somaliland ayaa sidaa sheegay.
Wasiirka ayaa sidoo kale ku sheegay hogaanka maamulka Somaliland mid waxa doona isaga dhaqma oo qorsha aan laheyn arintaasina ay tahay masuuliyad darro.
“Markii uu madaxweynuhu garoonka diyaaradaha Berbera ka Dhoofayey wax uu lahaa Anigu Cidna lama Balansani, cid aanu la soo shiraynaana ma jirto, danaha somaliland halkii ay nala Galaan waanu maraynaa, ma’ahayn in uu Madaxweynuhu qorsha aan lahubin Ku dhoofo. Waxa ay y ahayd in ay sugnaato booqashada madaxweynuhu oo ay yeelato marti-qaad rasmi ah.” Sidaa waxaa yiri Cabdir Raxmaan Yuusuf.